အမ်ဖီတမင်းသည်အပြုအမူနှင့် mesocorticolimbic dopamine receptor ဟူသောအသုံးအနှုန်းကို monogamous အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသ၌ vole (2011) - Your Brain On Porn
ဖက်တမင်းဆေးပြားဟာ monogamous အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole (2011) တွင်အပြုအမူနှင့် mesocorticolimbic dopamine အဲဒီ receptor စကားရပ်ပွောငျးလဲ
ဦးနှောက် Res ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC ဇူလိုင် 25, 2011 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
ဦးနှောက် Res ။ ဇန်နဝါရီ 7, 2011; 1367: 213-222 ။
အောက်တိုဘာ 8, 2010 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.brainres.2010.09.109
Kimberly အေလူငယ်,a,b yan လျူ,a,b Kyle အယ်လ် Gobrogge,a,b ဒါဝိဒ်သည်အမ် Dietz,b,c hui ဝမ်,a,b,c မိုဟာမက် Kabbaj,b,c နှင့် Zuoxin ဝမ်a,b,*
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် ဦးနှောက် Res
ကျနော်တို့မကြာသေးမီက (ထိုလူမှုရေးအရ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ထူထောင်ခဲ့ကြMicrotus ochrogaster) လူမှုရေးအပြုအမူများ၏စိတ်ကြွဆေး (AMPH) -induced ချို့ယွင်းအတွက် mesocorticolimbic dopamine (DA) ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အရာနှင့်အတူတိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အဖြစ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကိုအများစုအဖြစ်, ယနေ့အထိ, အထီးအာရုံစိုက်လာခဲ့သည်နှင့်လိင်ကွဲပြားမှုအများအား AMPH ဖို့အမူအကျင့်များနှင့် neurobiological တုံ့ပြန်မှုအစီရင်ခံနေကြတယ်, လက်ရှိလေ့လာမှုအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် AMPH ကုသမှု၏အမူအကျင့်များနှင့် neurobiological သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ (အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် AMPH များ၏အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုများအတွက်ထိုး-တုံ့ပြန်မှုကွေးဆုံးဖြတ်ရန်တစ် conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) ပါရာဒိုင်းအသုံးပြုသောနှင့်အလယ်အလတ်မှအနိမ့်နဲ့အေးစက်တွေ့ရှိခဲ့ (0.2 နှင့် 1.0 / ကီလိုဂရမ် mg), ဒါပေမယ့်အလွန်နိမ့်မဟုတ် 0.1 mg / kg), AMPH ၏ဆေးများတစ် CPP ကသွေးဆောင်။ ငါတို့သည်လည်း (1.0 / ကီလိုဂရမ် mg) AMPH တစ်အပြုအမူသက်ဆိုင်ရာထိုးဖို့ထိတွေ့မှုတစ်ခုဟာနျူကလိယ accumbens အတွက် DA အာရုံစူးစိုက်မှုတိုး (NACC) နှင့် caudate putamen ပေမယ့်မ medial prefrontal cortex သို့မဟုတ် ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) သွေးဆောင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ AMPH ထိတွေ့မှုအကြိမ်ကြိမ် (1.0 ရက်ဆက်တိုက်တကြိမ်တစ်နေ့လျှင်3မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်; မကြာသေးမီက DA အဲဒီ receptor စကားရပ်ပြောင်းလဲနှင့်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေး Bond အယှက်မှပြသခဲ့ပြီးသည့်ဆေးထိုးပါရာဒိုင်း) D1, အဲဒီ receptor mRNA အတွက် D2 တိုးလာပေမယ့်မရ အဆိုပါ NACC နှင့် D2 အဲဒီ receptor mRNA နှင့် VTA အတွက် binding D2 တူသောအဲဒီ receptor လျော့နည်းသွားသည်။ အတူတူအဲဒီဒေတာ AMPH အလှည့်ထဲမှာအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးအပြုအမူအပေါ်လေးနက်အကျိုးဆက်များရှိသည်နိုင်ရာ, တစ်ဒေသနှင့် receptor-တိကျတဲ့ထုံးစံအတွက် mesocorticolimbic DA neurotransmission ပွောငျးလဲကဖော်ပြသည်။
keywords: Psychostimulant, နျူကလိယ accumbens, Ventral tegmental ဧရိယာ, Autoreceptor, Pair ကို Bond, အခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေး
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး mesocorticolimbic dopamine (DA) စနစ် (အပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုမှတဆင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထဲတွင်အပြုအမူကျော်သူတို့ရဲ့အစွမ်းထက်ထိန်းချုပ်မှုကွိုးစားအားထုမှထင်နေကြတယ်ကယ်လီနှင့် Berridge, 2002; Ness နှင့် Berridge, 1997; Nestler, 2004, 2005; Panksepp et al ။ , 2002), အ medial prefrontal cortex (PFC) နှင့်နျူကလိယ accumbens (NACC) အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသော forebrain ဒေသများ, ရန် ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) နှင့်စီမံကိန်းတွင်အစပြုသည်ဟု DA-ထုတ်လုပ်ဆဲလ်ပါဝင်ပါသည်တဲ့အာရုံကြော circuit ကို။ သပ္ပါယ်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေ၏မျိုးဆက်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍသောဤမြင့်မားထိန်းသိမ်းထားအာရုံကြော circuit ကို, (Zahm, 2000) - အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များမှနေရာအနှံ့အပြုအမူတွေ (ဥပမာနို့တိုက်ကျွေးမှု (အပါအဝင်Narayanan et al ။ , 2010; Palmiter, 2007monogamous မျိုးစိတ်၌)) နှင့်မျိုးစိတ်-တိကျတဲ့ဖြစ်ကြောင်းရှိသူများ (ဥပမာ pair တစုံဘွန်း (Aragona နှင့်ဝမ်, 2009; Curtis et al ။ , 2006; လူငယ်တို့ et al ။ , 2010)) - သိသိသာသာအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှုအားဖြင့်ပြောင်းလဲနေသည်။ mesocorticolimbic ဦးနှောက်ဒေသများအတွင်းထိုကဲ့သို့သောကင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေး (AMPH), ပြောင်းလဲ DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်ရလဒ်တွေကို, DA အဲဒီ receptor စကားရပ်နှင့် sensitivity ကိုနှင့်အာရုံခံ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်အဖြစ်အလွဲသုံးစားမှု psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါး, ဥပမာစူးရှနှင့် / သို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှု (ဟင်နရီ et al ။ , 1989; ဟင်နရီနှင့်အဖြူရောင်, 1995; ဟူ et al ။ , 2002; Nestler, 2005; ပီယပ်နှင့် Kalivas, 1997; ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2001, 1988; Robinson နဲ့ Kolb, 1997; အဖြူနှင့်အ Kalivas, 1998) ။ ဒါဟာ (ဤ neuroadaptations တိရိစ္ဆာန်အပြုအမူအတွက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲအခြေခံစေခြင်းငှါထင်နေသည်Robinson နဲ့ Becker က, 1986), လူမှုရေးအပြုအမူတွေအပါအဝင် (ပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့ (လူငယ်တို့ et al ။ , 2011)) ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေမကြာသေးမှီကအလုပ် (လူမှုရေးအပြုအမူအပေါ်အလွဲသုံးမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများအတွက် mesocorticolimbic DA များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အဖြစ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ထူထောင်ထားပါတယ်လျူ et al ။ , 2010) ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles တစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်မိတ်ဖက် (ဆိုလိုသည်မှာ, မိတ်ဖက်ဦးစားပေး) အတွက်ဦးစားပေးဖွဲ့စည်းရန်ကြောင့်လူမှုရေးအရ monogamous ကြွက်တိုးချဲ့တွဲပြီးပြီးနောက်နှင့် / သို့မဟုတ်အဖော်ရှာ (များမှာInsel et al ။ , 1995; Williams က et al ။ , 1992; Winslow et al ။ , 1993), နှင့် mesocorticolimbic DA - ထို NACC အတွက်အထူးသဖြင့် DA neurotransmission - (ဤလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်Aragona et al ။ , 2003, 2006; Aragona နှင့်ဝမ်, 2009; Curtis et al ။ , 2006; Gingrich et al ။ , 2000; လျူနှင့်ဝမ်, 2003; ဝမ် et al ။ , 1999; လူငယ်တို့ et al ။ , 2010) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ AMPH မှထိတွေ့မှုသိသိသာသာအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် mesocorticolimbic DA လှုပ်ရှားမှုနဲ့ neurotransmission ပွောငျးလဲ။ ဥပမာအားဖြင့်, တစ်ခုတည်း AMPH ဆေးထိုးသိသိသာသာကို (NACC အတွက် extracellular DA အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်Curtis နှင့်ဝမ်, 2007) ။ တစ်အဲဒီ receptor-တိကျတဲ့ထုံးစံတစ်ခုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွင်နှင့်အတူတွဲသည့်အခါတစ်ဦး conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းသွေးဆောင်ရသော AMPH ထိတွေ့ခြင်းသည်, NACC အတွက်ပြောင်းလဲ DA အဲဒီ receptor ထုတ်ဖော်ထို့အပြင်သုံးရက် (လျူ et al ။ , 2010) ။ အရေးကြီးတာက, ဒီတူညီတဲ့မူးယစ်ဆေးကုသမှု (mesocorticolimbic DA neurotransmission အတွက် AMPH-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲဒီမျိုးစိတ်အတွက် pair တစုံဘွန်း၏ AMPH-သွေးဆောင်ချို့ယွင်းအခြေခံစေခြင်းငှါညွှန်း, မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်း inhibitedလျူ et al ။ , 2010).
အထက်ဖော်ပြထားတဲ့လေ့လာမှုများလူမှုရေးစဘွန်းနှင့်၎င်း၏နောက်ခံအာရုံကြောယန္တရားများ၏ AMPH-သွေးဆောင်ချို့ယွင်းဆနျးစစျဖို့ရာနှင့်အတူအကောင်းဆုံးပုံစံအဖြစ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ထူထောင်ခဲ့ကြသော်လည်း, သူတို့သည်ယောက်ျားအတွက်သီးသန့်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အကျိုးဆက်ကျနော်တို့အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် AMPH များ၏အမူအကျင့်များနှင့် neurobiological ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုအနည်းငယ်မျှသာသိကြ၏။ သက်သေအထောက်အထား (အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ထက် AMPH ဖို့ပိုအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုတည်ရှိAragona et al ။ , 2007) နှင့်အခြားမျိုးစိတ်အတွက်လေ့လာမှုများလေ့အလွဲသုံးစားမှု AMPH နှင့်အခြား psychostimulant မူးယစ်ဆေးနှစ်ဦးစလုံးအမူအကျင့်များနှင့် neurobiological ဆိုးကျိုးများအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုသတင်းပို့ (Becker က Hu က, 2008; Fattore et al ။ , 2008; Lynch, 2006) ။ ဥပမာအားဖြင့်, အမျိုးသမီးကြွက်များထက် သာ. ကြီးမြတ်သော locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့ AMPH တုံ့ပြန်အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်းတစ်ဦးထက်ပိုလျင်မြန်သော induction (ကိုပြသစခန်းနှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1988), ပိုမိုမြန်ဆန်ကိုကင်းနှင့်စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးဆည်းပူး (ဟူ et al ။ , 2004; Lynch, 2006; Lynch နှင့်ကာရိုး, 1999; Roth နဲ့ကာရိုး, 2004), နှင့် psychostimulants ရရှိရန်လှုံ့ဆျောမှု၏တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားဒီဂရီကိုသရုပ်ပြ (ရောဘတ် et al ။ , 1989; Roth နဲ့ကာရိုး, 2004) အမျိုးသားများထက်။ ထို့အပြင်လိင်ကွဲပြားမှု AMPH-သွေးဆောင် DA လွှတ်ပေးရေး (အတွင်းကွဲပြားခြားနားမှုများအပါအဝင် psychostimulants ဖို့ neurobiological တုံ့ပြန်မှုအတွက်မှတ်ချက်ပြုထားသည်Becker က, 1990; Becker ကနှင့် Ramirez, 1981), DA ဇီဝြဖစ် (စခန်းနှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1988), နှင့်ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇစကားရပ် (Castner နှင့် Becker က, 1996) ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် AMPH ၏ neurobiological သက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးအပြည့်အဝအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ, လူမှုရေးအပြုအမူများနှင့် mesocorticolimbic DA အကြားဆက်ဆံရေးကိုဆန်းစစ်လေ့လာမှုများအဘို့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မော်ဒယ်တည်ထောင်ရန်ထို့ကြောင့်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက် AMPH ထိတွေ့မှုများ၏အမူအကျင့်များနှင့် neurobiological သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ (ယခင်ကယောက်ျားအမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၌တည်နေတဲ့ CPP ကပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုလျူ et al ။ , 2010) အမျိုးသမီးအတွက် AMPH အမျိုးမျိုးဆေးများများ၏အမူအကျင့်ဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်ရန်။ အမျိုးသမီးအမျိုးသားများထက် AMPH တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအမူအကျင့် sensitivity ကိုပြသလေ့အဖြစ် (Aragona et al ။ , 2007; Becker က et al ။ , 2001; စခန်းနှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1988), ကျနော်တို့အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အထီးအဘို့အအစီရင်ခံများထက် AMPH ၏အနိမ့်ဆေးများမှာ CPP ကဖွဲ့စည်းမယ်လို့တွေးဆ။ ငါတို့သည်လည်း DA အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် DA receptor မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်အပေါ် AMPH ထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်နှင့်အမျိုးမျိုးသော mesocorticolimbic ဦးနှောက်ဒေသများတွင် binding ။ ကျနော်တို့ AMPH ထိတွေ့နေတဲ့ receptor- နှင့်ဒေသ-တိကျတဲ့ထုံးစံ၌ DA အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် DA အဲဒီ receptor စကားရပ်ပြောင်းလဲပစ်မယ်လို့တွေးဆ။ လက်ရှိလေ့လာမှုကနေရလာဒ်ကဒီမျိုးစိတ်အမျိုးသမီးအတွက်လူမှုရေးအပြုအမူအပေါ် AMPH များ၏သက်ရောက်မှုကို examine ကြောင့်အနာဂတ်အလုပျအတှကျအသုံးဝငျထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးပါလိမ့်မယ်။
2 ။ ရလဒ်များ
2.1 ။ စမ်းသပ်မှု 1: CPP ကသွေးဆောင် AMPH အေးစက်
စမ်းသပ်မှု 1 အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် AMPH-သွေးဆောင် CPP ကတစ်ထိုး-တုံ့ပြန်မှုကွေးတည်ထောင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးမှာအထီးမှအမျိုးသမီး၏ဆေးထိုး-တုံ့ပြန်မှုကွေးနှိုင်းယှဉ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျနော်တို့ (မကြာသေးမီကအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့တူညီနေတဲ့အေးစက်ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုလျူ et al ။ , 2010) ။ ဘာသာရပ်များကျပန်း AMPH များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအားဖြင့်မတူညီခဲ့ကြကြောင်းလေးစမ်းသပ်အုပ်စုများ [0.0 (များထဲမှသို့တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်n= 20), 0.1 (n= 8), 0.2 (n= 12), သို့မဟုတ် 1.0 (/ ကီလိုဂရမ် MGn= 13)] သူတို့ (အသေးစိတျအဘို့စမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုကြည့်ပါ) AMPH အေးစက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အားလုံးဘာသာရပ်များနောက်ဆုံးအေးစက် session ကိုအောက်ပါနေ့၌တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး-အခမဲ့ပြည်နယ်အတွက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ရှေ့မှောက်တွင်အဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးက CPP က pre-စမ်းသပ်ဖို့နှိုင်းယှဉ်ပါက Post-စမ်းသပ်ကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါး-တွဲလှောင်အိမ်ထဲမှာကုန်ကာလ၌သိသိသာသာတိုးများကသတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။
တစ်ဦးတည်းဆား [0.0 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်နဲ့ကုသဘာသာရပ်များ; t ကို(19)= 1.65; p<0.12] သို့မဟုတ်အနိမ့်ဆုံးပါဝင်သောဆား [0.1 mg / kg]; t(7)= 1.89; p<0.90] AMPH ၏အာရုံစူးစိုက်မှုသည်ကိန်းဂဏန်းများနှင့်ညီမျှသောပမာဏကိုမူးယစ်ဆေးဝါးတွဲထားသောအခန်းတွင်အေးစက်မတိုင်မီနှင့်အပြီး၌သုံးစွဲခဲ့ပြီး CPP ကိုမဖွဲ့စည်းခဲ့ပါ။သင်္ဘောသဖန်း။ 1A) ။ အဲဒီအစားဘာသာရပ်များ t [0.2 နဲ့ကုသ(11)= 2.77; p<0.02] သို့မဟုတ် 1.0 mg / kg [t ကို(12)= 2.53; p<0.03] AMPH သည်ကြံ့ခိုင်သော CPP ကိုပြသခဲ့သည်။ သူတို့သည်စမ်းသပ်မှုမတိုင်မီစမ်းသပ်မှုအပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးတွဲထားသောအခန်းထဲတွင်သိသိသာသာအချိန်ပိုကုန်ကြသည် (သင်္ဘောသဖန်း။ 1A) ။ locomotor လှုပ်ရှားမှုထဲမှာအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှု (မူးယစ်ဆေးကုသမှုမပြုမီသို့မဟုတ်အောက်ပါတစ်ခုခုအုပ်စုများအတွင်းသို့မဟုတ်အကြားမှတ်ချက်ချခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း။ 1B).
ဖက်တမင်းဆေးပြား (AMPH) အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေး (CPP က) နှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှု -induced ။ သူတို့အချိန်ညီမျှပမာဏသုံးစွဲအဖြစ်တစ်ဦး CPP ကဖွဲ့စည်းမပြုခဲ့အေးစက်၏ 0.0 ရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်း / ကီလိုဂရမ် AMPH MG 0.1 (သာဆား) သို့မဟုတ်3လက်ခံရရှိကြောင်းအမျိုးသမီး ...
2.2 ။ စမ်းသပ်မှု 2: AMPH ကုသမှုပြောင်းလဲ mesocorticolimbic DA အာရုံစူးစိုက်မှု
စမ်းသပ်မှု2အဆိုပါ PFC, NACC, caudate putamen (က CP) နှင့် VTA (အပါအဝင် select လုပ်ပါကဦးနှောက်ဧရိယာများတွင် DA အာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ်တစ်ခုတည်း AMPH ကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်သင်္ဘောသဖန်း။ 2A) ။ ဘာသာရပ်များကျပန်း (0.9% ဆား၏တစ်ခုတည်း ip ဆေးထိုးဖြစ်စေလက်ခံရရှိကြောင်းနှစ်ခုကိုစမ်းသပ်အုပ်စုများ၏တဦးတည်းသို့တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်n= 6) သို့မဟုတ် 1.0 ဆားအတွက်ဖျက်သိမ်း / ကီလိုဂရမ် AMPH Mg (n= 6) ။ ကအမျိုးသမီးအတွက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ (စမ်းသပ်မှု 1) နှင့်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles သွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်သောကြောင့်ဤအထိုး (ရွေးချယ်ခဲ့သည်Aragona et al ။ , 2007; လျူ et al ။ , 2010), နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်း၎င်း၏အပြုအမူဆက်စပ်မှုကိုညွှန်း။ အားလုံးဘာသာရပ်များဆေးထိုးပြီးနောက် 30 မိယဇျပူဇျောခဲ့ကြ, သူတို့၏ဦးနှောက်တစ်သျှူးအတွင်း DA များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုလြှပျစစျထောက်လှမ်း (HPLC-ECD) နဲ့မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အရည် Chromatography သုံးပြီးတိုင်းတာခဲ့သည်။
mesocorticolimbic ဦးနှောက်ဒေသများတွင် DA အာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ်တစ်ခုတည်း AMPH ဆေးထိုး (1 mg / kg) ၏ဆိုးကျိုးများ။ သိထားသည့် medial prefrontal cortex (PFC) အတွက်တစ်ရှူး-လာကြတယ်တည်နေရာပုံဥပမာ, နျူကလိယ accumbens (NACC), caudate putamen (က CP) နှင့် ventral ...
အဆိုပါ mesocorticolimbic DA စနစ် (အတွင်းဒေသ-တိကျတဲ့ထုံးစံ၌ DA အာရုံစူးစိုက်မှုပြောင်းလဲတစ်ဦးကတစ်ခုတည်း AMPH ကုသမှုသင်္ဘောသဖန်း။ 2B) ။ AMPH နဲ့ကုသဘာသာရပ်များအတွက် NACC [t အတွက် DA တစ်သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုရှိခဲ့(10) = 2.06; p<0.03] နှင့်က CP [t ကို(10)= 2.07, p<0.03] ဆား - ထိုးသွင်းထိန်းချုပ်မှုလုပ်ခဲ့တယ်ထက်။ သို့သော်အုပ်စုဖွဲ့ကွဲပြားမှုများကို PFC [t တွင်တွေ့ရသည်(10)= 0.03; p<0.49] သို့မဟုတ် VTA [t ကို(10)= 1.41; p<0.09] ။
2.3 ။ စမ်းသပ်ချက်3နှင့် 4: ထပ်ခါတလဲလဲ AMPH ထိတွေ့ DA အဲဒီ receptor mRNA စကားရပ်နှင့် binding ပွောငျးလဲ
စမ်းသပ်ချက်3နှင့်4အသီးသီး D1 အဲဒီ receptor နှင့် D2 အဲဒီ receptor mRNA စကားရပ်နှင့် D1 တူသောနှင့် D2 တူသောအဲဒီ receptor binding အပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲ AMPH ကုသမှု၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ယခင်စမ်းသပ်မှု AMPH ထိတွေ့မှုအကြိမ်ကြိမ်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့ကြ (1.0 ရက်ဆက်တိုက်တကြိမ်တစ်နေ့လျှင်3မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ကိုသိသိသာသာနောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက်နှင့်ဤအပြောင်းအလဲတချို့အတွက် AMPH-သွေးဆောင်ချို့ယွင်းအခြေခံစေခြင်းငှါ၎င်း NACC 24 ဇအတွက် DA အဲဒီ receptor စကားရပ်ပွောငျးလဲ (လူမှုရေးစဘွန်း၏လျူ et al ။ , 2010) ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့အမြိုးသမီးအတွက်ထပ်ခါတလဲလဲ AMPH ထိတွေ့မှု၏ neurobiological သက်ရောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးဆေးထိုးပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များကျပန်းဆား (ထိန်းချုပ်မှု ip ထိုးခံသောအုပ်စုနှစ်စု၏တဦးတည်းသို့တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်, n= 6) သို့မဟုတ် 1.0 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် AMPH (ပါဝင်တဲ့ဆားnသုံးရက်ဆက်တိုက်တကြိမ်တစ်နေ့လျှင် = 8) ။ အားလုံးဘာသာရပ်များနောက်ဆုံးဆေးထိုးအောက်ပါ 24 ဇယဇျပူဇျောခဲ့သညျ။ အဆိုပါ D1 အဲဒီ receptor mRNA ၏သိပ်သည်းဆ D1 တူသောအဲဒီ receptor စည်းနှောင် D2 အဲဒီ receptor mRNA နေစဉ် NACC နှင့်က CP အတွက်တိုင်းတာနှင့် D2 တူသောအဲဒီ receptor စည်းနှောင်ခဲ့ NACC, က CP နှင့် VTA အတွက်တိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ D1R mRNA နှင့် D1 တူသောအဲဒီ receptor စည်းနှောင် (ကြောင့်ဒီဦးနှောက်ဒေသတွင်၎င်းတို့၏တည်ရှိမရှိခြင်းဖို့ VTA အတွက်တိုင်းတာမခံခဲ့ရပါWeiner et al ။ , 1991).
ထပ်ခါတစ်လဲလဲ AMPH ထိတွေ့နေတဲ့ receptor- နှင့်ဒေသ-တိကျတဲ့ထုံးစံ၌ DA အဲဒီ receptor mRNA စကားရပ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ထပ်ခါတလဲလဲ AMPH ကုသမှုခံသောဘာသာရပ်များ [သည့် NACC အတွက် D1 အဲဒီ receptor mRNA တံဆိပ်ကပ်တဲ့သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အဆင့်ကိုပြသt(12)= 2.85; p <0.01] ဒါပေမယ့် CP မဟုတ် [t(12)= 1.96; p <0.07], ဆား - ထိုးသွင်းထိန်းချုပ်မှုထက်သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 3A နှင့် B) ။ အုပ်စုတစုကွဲပြားမှုဟာ NACC ဖြစ်စေများတွင် D2 အဲဒီ receptor mRNA တံဆိပ်ကပ်ထဲမှာမတွေ့ [t(12)= 1.56; p <0.14] or CP [t(12)= 1.79; p <0.10] (သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 3C နဲ့ D) ။ သို့သော်ထပ်ခါတလဲလဲ AMPH ကုသမှုသိသိသာသာ [သည့် VTA အတွက် D2 အဲဒီ receptor mRNA များ၏အဆင့်ကိုလျော့ကျt(12)= 3.11; p <0.01] (သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 3Eand က F).
အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက် dopamine အဲဒီ receptor mRNA တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲ AMPH အုပ်ချုပ်ရေး (1 ရက်ဆက်တိုက်3mg / kg / နေ့) ၏ဆိုးကျိုးများ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲ AMPH ကုသမှု D1 အဲဒီ receptor နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် (D1R) mRNA တံဆိပ်ကပ်ခြင်း (NACC) တိုးလာပေမယ့်မရ ...
ထပ်ခါတစ်လဲလဲ AMPH ထိတွေ့မှု (D1 တူသောအဲဒီ receptor အပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 4A နှင့် B) သို့မဟုတ် D2 တူသောအဲဒီ receptor (သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 4C နဲ့ Dအဆိုပါ NACC အတွက်) စည်းနှောင်အဆင့်ဆင့် [D1 တူသော: t(12)= 0.40; p <0.35, D2 ကဲ့သို့: t(12)= 0.77; p<0.23] သို့မဟုတ် CP [D1 ကဲ့သို့: t(12)= 0.63; p<0.27, D2 ကဲ့သို့: t(12)= 0.91; p<0.19] ။ သို့သော် AMPH ကုသသောဘာသာရပ်များသည်ဆားဆေးထိုးထိန်းချုပ်မှုများထက် VTA တွင် D2 ကဲ့သို့သောအဲဒီ receptor ကိုပိုမိုနိမ့်ကျစေပါတယ်။t(12)= 1.91; p<0.04] (သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 4E နှင့် F).
အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက် dopamine အဲဒီ receptor binding အဆင့်ဆင့်အပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲ AMPH အုပ်ချုပ်ရေး (1 ရက်ဆက်တိုက်3mg / kg / နေ့) ၏ဆိုးကျိုးများ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲ AMPH ကုသမှုထဲမှာ (A နှင့် B) D1 ကဲ့သို့ပြောင်းလဲသို့မဟုတ် D2 တူသောအဲဒီ receptor binding အဆင့်ဆင့် (C နှင့် D ကို) မပြုခဲ့ ...
လက်ရှိလေ့လာမှုအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် AMPH ထိတွေ့မှုများ၏အမူအကျင့်များနှင့် neurobiological သက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ စုပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာ AMPH, အပြုအမူအပေါ်ထိုး-မှီခိုသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်အဆိုပါ NACC နှင့်က CP အတွက် DA အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးပွါးနှင့် DA receptor မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်နှင့် receptor- နှင့်ဒေသ-တိကျတဲ့ထုံးစံ၌စညျးပွောငျးလဲကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာနောက်ဆုံးမှာဒီမျိုးစိတ်အမျိုးသမီးအတွက်လူမှုရေးအပြုအမူအပေါ် AMPH ၏ဆိုးကျိုးများအားစုံစမ်းစစ်ဆေးအနာဂတ်လေ့လာမှုများအဘို့အအသုံးဝင်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးနိုငျသညျ။
တစ်ဦးက CPP ကအဓိကစစ်ကူ (နဲ့အတူတွဲထားပြီးတဲ့ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာအခြေအနေတွင်များအတွက် preference ကိုထင်ဟပ်Bardo နှင့် Bevins, 2000) - ဤကိစ္စတွင်အတွက် AMPH - မကြာခဏမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်တစ်ခုအပြုအမူသက်ဆိုင်ရာ, သွယ်ဝိုက်ဆိုသော်ငြားအတိုင်းအတာအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles AMPH ၏အလယ်အလတ်ဆေးများမှအနိမ့်နှင့်အတူကုသမှုပြီးနောက် CPP ကဖွဲ့စည်းကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ (အတူတူပင် CPP ကပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးမှီခဲ့အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၌အကြှနျုပျတို့၏မကြာသေးမီရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့အခါလျူ et al ။ , 2010) ဤအချက်အလက်များ, အတူတူ, အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီများအတွက်ဆေးထိုး-တုံ့ပြန်မှုကွေးအတွက်ဘယ်ပြပြောင်းကုန်ပြီဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အထူးသ 0.2 / ကီလိုဂရမ် MG သို့မဟုတ် AMPH ၏ 1.0 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောဆေးများယောက်ျားတစ်ဦးချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ induction လိုအပ်ခဲ့ကြသော်လည်း AMPH မြင့်မားဆေးများ (အမျိုးသမီးတစ်ဦး CPP ကသွေးဆောင်လျူ et al ။ , 2010) ။ အမျိုးသမီး၏ဆေးထိုး-တုံ့ပြန်မှုကွေး၌ဤဘယ်ပြပြောင်းကုန်ပြီတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအေးစက်ပါရာဒိုင်းအသုံးပြုခဲ့တဲ့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ယခင်လေ့လာမှု (နဲ့အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်Aragona et al ။ , 2007), နှင့်တစ်သမတ်တည်းကိုအခြားမျိုးစိတ်အတွက်သရုပ်ပြခဲ့တာကိုအထီး-တစ်ဦးတွေ့ရှိချက်ထက် AMPH ၏, အမျိုးသမီးတို့သည်အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများပိုမိုထိခိုက်မခံ, ထိုကြိုးသက်ရောက်မှုမှဖြစ်ကောင်းပိုပြီးအားနည်းချက်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု (စခန်းနှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1988; ဟူ et al ။ , 2004; Lynch, 2006; Lynch နှင့်ကာရိုး, 1999; ရောဘတ် et al ။ , 1989; Roth နဲ့ကာရိုး, 2004) နှင့်ကြောင်းအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးအပြုအမူအပေါ် AMPH ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာ, ငါတို့သည်လည်း AMPH အုပ်ချုပ်ရေးတွေ့ရှိခဲ့ - တစ်အပြုအမူသက်ဆိုင်ရာထိုးမှာအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles များအတွက် (1.0 / ကီလိုဂရမ် mg) - ပု NACC အတွက် DA အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာနှင့်က CP ပေမယ့်မ PFC သို့မဟုတ် VTA ။ ဤရလဒ်သည် DA အာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ဒေသ-တိကျတဲ့ AMPH-သွေးဆောင်တိုးမြှင်ဖော်ပြသည်။ မျိုးစိတ်တစ်ခုအရေအတွက်ယခင်လေ့လာမှုများမကြာမီ AMPH ဆေးထိုးပြီးနောက် NACC နှင့်က CP အတွက် extracellular DA လွှတ်ရာသော induction သရုပ်ပြသကဲ့သို့ (cho et al ။ , 1999; clause နှင့် Bowyer, 1999; Curtis နှင့်ဝမ်, 2007; di Chiara et al ။ , 1993; Drevets et al ။ , 2001), ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတွင်ဤဒေသများအတွင်းတိုးမြှင့် DA အာရုံစူးစိုက်မှု DA လွှတ်ပေးရေးတစ်ခု AMPH-သွေးဆောင်တိုးမြှင့်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ DA အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလည်း DA ပေါင်းစပ်နှင့်ဇီဝြဖစ်ကြောင့်ထိခိုက်နေသည်အဖြစ်သို့သော်လည်း, ဒီထင်ကြေးနောက်ထပ်စမ်းသပ်ချက်များတွင်စမ်းသပ်ပြီးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် AMPH ထိတွေ့ပြီးနောက် VTA အတွက် DA အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ကျဆင်းခြင်းဆီသို့တစ်ဦးမှတျသားဖှယျလမ်းကြောင်းသစ်တခုရှိ၏။ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှု (သိသိသာသာမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်p <0.09), နောက်ထပ်စမ်းသပ်ချက်အုပ်ချုပ်သို့မဟုတ် In- ဒီ ဦး နှောက်ဒေသအတွက် DA အာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ် AMPH တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုအုပ်ချုပ်ဖို့လိုအပ်သည်။
နောက်ထပ်အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် AMPH ထိတွေ့မှု၏ neurobiological အကျိုးဆက်များကိုနားလည်နိုင်စေရန်, ကျွန်တော် DA အဲဒီ receptor mRNA စကားရပ်အပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲ AMPH ကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောဦးနှောက်ဒေသများတွင် binding ။ ကျနော်တို့ (မကြာသေးမီက DA အဲဒီ receptor စကားရပ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်နှင့်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးအပြုအမူအယှက်မှသရုပ်ပြခဲ့တာကိုတစ်ဦး AMPH ထိုးခြင်းနှင့်ဆေးထိုးပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုလျူ et al ။ , 2010) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ data တွေကိုသိသိသာသာ NACC အတွက် D1 အဲဒီ receptor mRNA များ၏အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းထပ်ခါတလဲလဲ AMPH ထိတွေ့ဖော်ပြသည်။ (ကဆင်တူပေမယ့်သိသိသာသာမဟုတ်p <0.07), အကျိုးသက်ရောက်မှု AMPH အဖြစ်ကောင်းစွာဒီဒေသအတွက် D1R mRNA စကားရပ်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါညွှန်ပြခြင်း, CP ထဲမှာမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ဗီဇစကားရပ်တွင်ဤအပြောင်းအလဲများရှိနေသော်လည်း AMPH ထိတွေ့မှုက NAcc သို့မဟုတ် CP တွင် D1 ကဲ့သို့သော receptor ကိုစည်းနှောင်ထားသည့်အဆင့်ကိုမပြောင်းလဲစေပါ။ D1 ကဲ့သို့သော receptors အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ D1 receptors နှင့် D5 receptors - နှစ်ခုစလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ receptor binding စမ်းသပ်မှုတွင်အသုံးပြုသော D1 ကဲ့သို့ ligand မှတံဆိပ်ကပ်ရန်အလားအလာရှိခဲ့သည်။ သို့သော် D5 receptors သည် NAcc နှင့် CP တို့တွင်မရှိသလောက်ဖြစ်သောကြောင့် (Missale et al ။ , 1998; Tiberi et al ။ , 1991), ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာ D1 Receptor protein အားအဆင့်ဆင့်အတွက်, အထူးသ, ပြောင်းလဲမှုမရှိခြင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အလားတူပင်အခြားကြွက်မျိုးစိတ်အတွက်ယခင်အစီရင်ခံစာများအ AMPH သို့မဟုတ်အခြား psychostimulants ဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ယုံကြည်စိတ်ချရသော (ပြန်လည်သုံးသပ်မြင်ဘို့ (ဤဦးနှောက်ဒေသများတွင် D1 အဲဒီ receptor ဆှဖှေဲ့သို့မဟုတ်သိပ်သည်းဆပြောင်းလဲပစ်တော်မမူကြောင်းညွှန်ပြခဲ့ကြပီယပ်နှင့် Kalivas, 1997; အဖြူနှင့်အ Kalivas, 1998)), မူးယစ်ဆေးကုသမှုအောက်ပါအထိတစ်လအဲဒီ receptor agonists D1 မှ NACC အာရုံခံ၏တုန့်ပြန်တိုးမြှင့်နေသော်လည်း (ဟင်နရီ et al ။ , 1989; ဟင်နရီနှင့်အဖြူရောင်, 1991, 1995) ။ ငါတို့သည်လည်း (အဘယ်သူမျှမ D2 အဲဒီ receptor mRNA ပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ် AMPH ကုသမှုအောက်ပါအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် NACC သို့မဟုတ်က CP အတွက်အဆင့်ဆင့် binding D2 တူသောအဲဒီ receptor, ကြွက်နှင့်ကြွက်များတွင်သူတို့နှင့်အတူတသမတ်တည်းတစ်ဦးတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံတင်ပြRichtand et al ။ , 1997; Sora အဘိဓါန် et al ။ , 1992) နှင့် NACC D1 receptors ထပ်ခါတလဲလဲ AMPH ထိတွေ့ရန်တုန့်ပြန် (တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအခန်းကဏ္ဍကြောင်းအကြံပြုချက်Berke နှင့် Hyman, 2000).
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တွေ့ရှိချက်ထပ်ခါတလဲလဲ AMPH ကုသမှုသိသိသာသာ D2 receptor မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ VTA အတွက် binding D2 တူသောအဲဒီ receptor ၏အဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဆိုပါ VTA အတွက် D2 receptors (A10 DA အာရုံခံ (အ VTA နှင့်ဒေသများ mesocorticolimbic မှစီမံကိန်းတွင်အစပြုသည်ဟု DA projection အာရုံခံ) ၏ somatodendritic ဒေသများပေါ်တွင်တည်ရှိသည်Aghajanian နှင့် Bunney, 1977; မာကျူရီ et al ။ , 1997; Oades နှင့် Halliday, 1987; အဖြူနှင့်ဝမ်, 1984b) ။ ဤရွေ့ကား receptors autoreceptors အဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်နှင့် (မိမိတို့၏ activation ဆဲလ်အမြှေးပါး၏ hyperpolarization မှဦးဆောင်နှင့်ဆဲလ်၏တားစီးပစ်ခတ်မာကျူရီ et al ။ , 1997) (ပြန်လည်သုံးသပ်မြင်ဘို့ (မာကျူရီ et al ။ , 1992)), DA ၏ပမာဏလျော့ကျလာ (ဥပမာ NACC အဖြစ်ပစ်မှတ်ဒေသများသို့ဖြန့်ချိUsiello et al ။ , 2000) ။ A2 ဆဲလ်တားစီးနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအမျိုးမျိုးတုံ့ပြန်အတွက် NACC သို့ DA တစ်နောက်ဆက်တွဲလျတ် (တစ်မရှိခြင်းအတွက်အ D10 အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်းသို့မဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇကိုပယ်ဖျက်ရလဒ်များကိုမာကျူရီ et al ။ , 1997; Rouge-ပိုတငျး et al ။ , 2002) ။ ထို့ကြောင့် VTA အတွက် D2 receptors အတွက်ကျဆင်းခြင်းတစ်ခု AMPH-သွေးဆောင်ချ-စည်းမျဉ်းအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက် somatodendritic autoreceptors ၏ညွှန်ပြစေခြင်းငှါပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာမှတ်ချက်ချသည်။ Auto-receptor သိပ်သည်းဆပြောင်းပြန် A10 DA အာရုံခံ (များ၏လှုပ်ရှားမှုနှုန်းနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်အဖြူနှင့်ဝမ်, 1984a), ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုဟာ NACC အတွက်တိုးမြှင့် DA လွှတ်ပေးရန်နှင့် neurotransmission ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။ အလားတူပင်ယခင်သုတေသနတိုးလာအလိုအလျောက်လှုပ်ရှားမှုထဲမှာရရှိလာတဲ့, ထပ်ခါတလဲလဲ psychostimulant ထိတွေ့ပြီးနောက် A10 DA အာရုံခံအပေါ် somatodendritic autoreceptors တစ် subsensitivity သရုပ်ပြနှင့် A10 DA ဆဲလ် (၏ Basal ပစ်ခတ်ရန်နှုန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဟင်နရီ et al ။ , 1989) မူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှု၏အဆုံးတွင်အောက်ပါနေ့ရက်ကာလအဘို့ဆက်လက်ရှိစေခြင်းငှါ (Ackerman နှင့်အဖြူရောင်, 1990) ။ ဒါဟာ (D2 နှင့် D3 နှစ်ဦးစလုံး receptors အဆိုပါ VTA အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့် dopaminergic အာရုံခံအပေါ် presynaptically ဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ကြောင်း, သို့သော်, သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်Diaz et al ။ , 1995; မာကျူရီ et al ။ , 1997), D2 တူသောအဲဒီ receptor အတွက်လက်ရှိကျဆင်းခြင်း binding ကြောင်းညွှန်ပြဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးအဲဒီ receptor Subtype ပြောင်းလဲမှုများမှစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်။ AMPH ထိတွေ့မှုကြောင့်ထိခိုက်တိကျတဲ့အဲဒီ receptor မျိုးကွဲများ၏အသိပညာ (D2 အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာအနက်များအတွက်အရေးကြီးပါသည်, ဒါပေမယ့် D3 မဟုတ်, receptors, DA အာရုံခံ၏ autoreceptor တားစီးဘို့လိုအပ်သောများမှာမာကျူရီ et al ။ , 1997; Rouge-ပိုတငျး et al ။ , 2002) ။ သို့တိုင်, D3 အဲဒီ receptor စကားရပ် D2 receptors (၏ရန် VTA ဆွေမျိုးအတွက်အလွန်နိမ့်သည်အဖြစ်Bouthenet et al ။ , 1991), နှင့် spiperone (ထို D2 အဲဒီ receptor ထက် D3 များအတွက်ပိုမိုမြင့်မားဆှဖှေဲ့ပြသMissale et al ။ , 1998), က D2 တူသောအဲဒီ receptor binding ပေါ်ရှိလက်ရှိသက်ရောက်မှုမဟုတ်ဘဲ D2 receptors ထက် D3 ၏အဆင့်ဆင့်အတွက်တိကျတဲ့ကျဆင်းခြင်း, ကိုယ်စားပြုကြောင်းဖွယ်ရှိသည်။
အမျိုးသမီးအတွက်ထပ်ခါတလဲလဲ AMPH ထိတွေ့မှု၏ neurobiological သက်ရောက်မှု (အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ယခင်ကတွေ့ရှိခဲ့သူတို့နှင့်အတူအချို့သောတူညီပြသနေစဉ်လျူ et al ။ , 2010), နှစျခုအရေးကြီးသောကွဲပြားခြားနားမှုထင်ရှားရှိပါတယ်။ AMPH အတွေ့အကြုံကိုနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းအတွက် NACC အတွက် D1 အဲဒီ receptor mRNA တိုးလာပေမယ့်ပထမဦးဆုံးသည်, အလုပ်လုပ်တဲ့ consequencesofthisincreaseingene ကူးယူသာ (ယောက်ျားအတွက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည် AMPH အတွက် NACC D1 Receptor protein အားအဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်သော်လည်းဆိုလိုသည်မှာအမျိုးသမီးအဆင့်ဆင့် binding D1 တူသောအဲဒီ receptor အတွက်မဆိုစသောအပြောင်းအလဲမပြခဲ့ပါဘူး ယောက်ျား) ။ ဤရွေ့ကားကွဲပြားခြားနားမှုသည်ဤအလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်များ detect ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရေအတွက်နည်းစနစ်များအသုံးပြုခြင်းမှဖြစ်မည်အကြောင်း (အနောက်တိုင်းချေယောက်ျားအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်သော်လည်းဆိုလိုသည်မှာအဲဒီ receptor အမျိုးသမီးအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည် binding) သို့မဟုတ် NACC အတွင်း D1 receptors အပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲ AMPH ကုသမှုလိင်-တိကျတဲ့သက်ရောက်မှုညွှန်ပြစေခြင်းငှါ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏။ ဒုတိယအချက်မှာ AMPH ကုသမှု (အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် VTA အတွက် D2 အဲဒီ receptor mRNA စကားရပ်အပေါ်မပါသက်ရောက်မှုရှိခဲ့လျူ et al ။ , 2010), ဒါပေမဲ့သိသိသာသာ, အမျိုးသမီး-ထပ်မံအတွက် AMPH ၏ neurobiological သက်ရောက်မှုလိင်-တိကျတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအဆင့်ဆင့် binding ကအဖြစ် D2 အဲဒီ receptor လျော့နည်းသွားသည်။ ဒါကစိတ်ကူး (AMPH ကုသမှုအောက်ပါဗီဇစကားရပ်များတွင်လိင်ကွဲပြားမှုညွှန်ပြသောအခြားမျိုးစိတ်အတွက်တွေ့ရှိချက်ကထောက်ခံနေသည်Castner နှင့် Becker က, 1996).
အဆိုပါ mesocorticolimbic DA စနစ် AMPH-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးအပြုအမူအပေါ်အရေးကြီးသောအကျိုးဆက်များရှိနိုင်သည်။ အပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့အမျှအရွယ်ရောက်ပြီးသူသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (အဖော်ရှာပြီးနောက်မွဲ pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းCarter က et al ။ , 1995; Williams က et al ။ , 1992; Winslow et al ။ , 1993) နှင့် NACC DA တစ်အဲဒီ receptor-တိကျတဲ့ထုံးစံ၌နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်း၌ဤအပြုအမူထိန်းညှိ: D2 တူသောအဲဒီ receptor activation နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်နှင့် D1 တူသောအဲဒီ receptor activation (မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်Aragona et al ။ , 2003, 2006; Aragona နှင့်ဝမ်, 2009; Gingrich et al ။ , 2000; လျူနှင့်ဝမ်, 2003; ဝမ် et al ။ , 1999) ။ ဒီနေရာမှာအစီရင်ခံရှိသူများအပါအဝင် mesocorticolimbic ဦးနှောက်ဒေသများတွင်ထိုကဲ့သို့, AMPH-သွေးဆောင်စသောအပြောင်းအလဲအဖြစ်, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်တစ်စုံ Bond အပြုအမူအပေါ်လေးနက်အကျိုးဆက်များရှိနိုငျတယျ။ ယောက်ျားများတွင်ဥပမာ, D1 တူသောအတွက် AMPH-သွေးဆောင်တိုးအဆိုပါ NACC အတွက် receptors (မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ AMPH-သွေးဆောင်ချို့ယွင်းအခြေခံမှထင်နေကြတယ်လျူ et al ။ , 2010), NACC D1 အဲဒီ receptor activation (မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေးဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်အဖြစ်Aragona et al ။ , 2006) ။ ထို့အပြင်ထိုး-ရသည် AMPH ကုသမှုစဉ်အတွင်း D1 receptors ၏ pharmacological ပိတ်ဆို့နောက်ထပ် AMPH တစ် D1 အဲဒီ receptor-mediated ယန္တရား (မှတစ်ဆင့် pair တစုံဘွန်းအယှက်စေခြင်းငှါညွှန်း, မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ AMPH-သွေးဆောင်ချို့ယွင်းဖျက်သိမ်းလျူ et al ။ , 2010) ။ အမျိုးသမီးများတွင်အစားကြောင့်လက်ရှိတွေ့ရှိချက် (ဆိုလိုသည်မှာယင်း VTA အတွက် D2 အဲဒီ receptor စကားရပ်လျော့နည်းသွား), အ NACC အတွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် DA လွှတ်ပေးရန်အားဖြင့်ဆိုလို autoreceptor တားစီး၏မရှိခြင်းဖွယ်ရှိ AMPH-ကုသ voles အတွက်တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ DA အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ခိုင်မာတဲ့မြင့်တက်အနိမ့်ဆှဖှေဲ့ D1 receptors (ကိုသက်ဝင်အဖြစ်Richfield et al ။ , 1989), ဒီ neuroadaptation အမျိုးသမီးအတွက်လူမှုရေးစဘွန်းအပေါ်အရေးကြီးသောအမူအကျင့်အကျိုးဆက်များရှိနိုင်သည်။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့လက်ရှိလေ့လာမှု AMPH တစ်အပြုအမူသက်ဆိုင်ရာထိုးအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ mesocorticolimbic DA စနစ်, ဒီမျိုးစိတ်များ၏ monogamous လူမှုရေးအပြုအမူအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့သော့ချက် circuit ကိုအတွင်း DA အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အဲဒီ receptor စကားရပ်ပွောငျးလဲကြောင်းပြသသည်။ ဤရလဒ်သည် pair တစုံဘွန်းနှင့်ပါဝင်ပတ်သက် neurochemical ယန္တရားများအပေါ် AMPH ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်အနာဂတ်လေ့လာမှုများများအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်သည်။
4 ။ စမ်းသပ်လုပျထုံးလုပျနညျး
4.1 ။ တိရိစ္ဆာန်များ
ချုပ်ထားလျက်ရှိသော-ရပ်ကြီးအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (Microtus ochrogaster) အသက် 21 ရက်ပေါင်းမှာနို့ပြီးတော့ (29 × 18 × 13 စင်တီမီတာ) အာရဇ်ပင် chip ကိုအိပ်ယာ်ပလပ်စတစ်အိတ်များအတွက်လိင်တူချင်း sibling အားလုံး၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်တောင်ပိုင်းအီလီနွိုက်ပြည်နယ်အတွင်းရှိလူဦးရေကနေဆင်းသက်တော်မူ။ သူတို့ကတစ်ဦး 14 အပေါ်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်: 10 အလင်း: မှောင်မိုက်တဲ့သံသရာ (0700 ဇမှာပေါ်ထွန်း) နဲ့ ကြော်ငြာ libitum အစားအစာနှင့်ရေရရှိမှု။ အပူချိန် 21 ± 1 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုအားလုံးတိရိစ္ဆာန်များအသက် 90 နှင့် 120 ရက်ပေါင်းအကြားခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်ချက်ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှာ Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီများ၏လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
4.2 ။ အေးစက်သောအရပ် preference ကိုပါရာဒိုင်း
အဆိုပါ CPP ကယန္တရား (ထိုယခင်ကဖော်ပြထားနှင့်အမြင်အာရုံကွဲပြားခဲ့ကြသည်နှစ်ခုပလပ်စတစ်အိတ်များ (လူမည်း vs. အဖြူ) ၏ပါဝင်သည်နှင့်ဆွန်းပြွန်အားဖြင့်အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဖို့တူညီခဲ့သည်Aragona et al ။ , 2007; လျူ et al ။ , 2010) ။ ကျနော်တို့ (အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မကြာသေးမီကတီထွင်တဲ့အေးစက်ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုလျူ et al ။ , 2010) ။ အတိုချုပ်, ရှိသမျှဘာသာရပ်များ Pre-စမ်းသပ်နေ့၌ 30 မိတစ် 1 ပေးခဲ့နှင့်တစ်ဦးချင်းစီလှောင်အိမ်ထဲမှာနေခဲ့ရသည်အချိန်ပမာဏကို quantified ခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်း pre-စမ်းသပ်ကာလအတွင်းလျော့နည်းအချိန်ကုန်သောလှောင်အိမ်မူးယစ်ဆေး-တွဲလှောင်အိမ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်နှင့်အခြားဆား-တွဲလှောင်အိမ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ အေးစက်လာမယ့်သုံးရက် (ရက် 40-2) အတွက်နှစ်ခု4မိနစ်အစည်းအဝေးများတစ်ခုချင်းစီကိုတစ်နေ့တာအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ နံနက်ယံအစည်းအဝေးများ (0900 ဇ) စဉ်အတွင်းဘာသာရပ်များ 0.0, 0.1, 0.2, ဒါမှမဟုတ် 1.0 ၏ intraperitoneal (ip) ထိုးဆေး / ကီလိုဂရမ်ဃ-AMPH sulfate (Sigma, စိန့်လူးဝစ်, MO ကို, USA) ကိုချက်ချင်းနေရာချမခံရမီ, ဆားအတွက်ဖျက်သိမ်း MG ကိုလက်ခံရရှိ မူးယစ်ဆေး-တွဲလှောင်အိမ်သို့။ မွန်းလွဲပိုင်းတွင်အစည်းအဝေးများ (1500 ဇ) စဉ်အတွင်းဘာသာရပ်များချက်ချင်းဆား-တွဲလှောင်အိမ်သို့ထားရှိမခံရမီဆားတစ်ဦး ip ဆေးထိုးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တစ်ရက်လေ့ကျင့်ရေးအချိန်ဇယားနှုန်းဒါကနှစ်ဦးကိုရုံးတင်စစ်ဆေး (ကြွက်များတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးကမ့်ဘဲလ်နှင့်လှံ, 1999; zhou et al ။ , 2010) နှင့်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၌အကြှနျုပျတို့၏ယခင်လေ့လာမှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည် (လျူ et al ။ , 2010) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေယာဉ်မှူးဒေတာ counterbalanced နှင့်ပုံသေဆေးထိုး / အေးစက် Paradigm နဲ့ကုသဘာသာရပ်များအကြားအပြုအမူများမကွဲပြားမှု (အတည်မပြုရသေးသော Data) ညွှန်ပြထားသောကြောင့်နှင့်စံချိန်စံညွှန်းမီဆေးထိုးခြင်းနှင့်တစ်သျှူးအစုအဝေးအချိန်ဇယားနောက်ဆက်တွဲစမ်းသပ်မှုအတွက် DA အမှတ်အသားစကားရပ်၏တိုင်းတာခြင်းများအတွက်အရေးကြီးသောကြောင့်နောက်ထပ်, ဒီပါရာဒိုင်းရွေးချယ်ခဲ့သည် အဖြစ်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ကနေဒေတာတွေကိုနှင့်တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက် (လျူ et al ။ , 2010) ။ တစ်ရက်5တွင်, အားလုံးဘာသာရပ်များတစ် 30 မိ Post-စမ်းသပ်မှုအတွက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ရှေ့မှောက်တွင်အဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ တိရိစ္ဆာန်များအိတ်များအကြားဖြတ်ကျော်ကြောင်းအကြိမ်အရေအတွက်အကျူးနဲ့ post-စမ်းသပ်ကာလအတွင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသောနှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအညွှန်းကိန်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
4.3 ။ တစ်ရှူးပြင်ဆင်မှု
ဘာသာရပ်များလျှင်မြန်စွာစမ်းသပ်မှု 30 နှင့်2အတွက်နောက်ဆုံးဆေးထိုးအောက်ပါစမ်းသပ်မှု 24 နှင့်3ဇအတွက်ဆေးထိုးပြီးနောက်4မိခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံခဲ့ရသည်။ သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုလျင်မြန်စွာ -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထားမခံရမီ, ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ချက်ချင်းခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲပေါ်အေးခဲခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်မှု2ကနေဦးနှောက် 300 μmမှာ coroner sectioned ခဲ့ကြသည်နှင့်အကဏ္ဍများကိုဒီအတိုင်းအရည်ပျော်အောင်-တပ်ဆင်ထားခဲ့သည် Superfrost / ပေါင်းဆလိုက်ပေါ်သို့။ အဆိုပါ Paxinos နှင့် Watson ဟာကြွက်ဦးနှောက် Atlas (Paxinos နှင့် Watson, 1998) တစ်ဦး၏ရာမှနှစ်နိုင်ငံတစ်ရှူးလာကြတယ်အဆိုပါ PFC (ဟင်းပွဲများ 8-10), NACC (ဟင်းပွဲများ 9-11), က CP (ဟင်းပွဲများ 10-12) နှင့် VTA (ဟင်းပွဲများ 40-43), အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောဦးနှောက်ဒေသများသိရှိနိုင်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည် 1 မီလီမီတာအချင်း (ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း။ 2A) နှင့်လုပ်ငန်းများ၌သည်အထိ -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထား။ မ mesocorticolimbic ဦးနှောက်ဒေသဖြစ်သော်လည်းက, အ NACC နှင့် PFC ကဲ့သို့, VTA (ထံမှ DAergic input ကိုလက်ခံရရှိကြောင့်, က CP ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်Oades နှင့် Halliday, 1987) ဒါပေမယ့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ DAergic စည်းမျဉ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့ပေါ်လာပါဘူး (Aragona et al ။ , 2003, 2006; လျူနှင့်ဝမ်, 2003) ။ စမ်းသပ်မှု3နှင့်4အဘို့, ဦးနှောက်နွေးထွေး-တပ်ဆင်ထား Superfrost / ပေါင်းဆလိုက်ပေါ်သို့ခဲ့ 10 μmအပိုင်း 14 အစုံသို့ coroner ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
4.4 ။ DA ထုတ်ယူမှုနှင့် HPLC-ECD ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ DA ထုတ်ယူခြင်းဖျော်ဖြေခဲ့သည် (Aragona et al ။ , 2002), ကြောင်းတစ်ရှူးနမူနာ 50% EDTA နှင့်အတူ 0.1 M က Perchloric acid တို၏ 0.02 μLအတွက် sonicated ခဲ့ကြသည် မှလွဲ. ။ DA အာရုံစူးစိုက်မှုယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့လြှပျစစျထောက်လှမ်း (HPLC-ECD) နဲ့မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အရည် Chromatography သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည် (Curtis et al ။ , 2003) ကိုအောက်ပါချွင်းချက်အတူ။ အဆိုပါမိုဘိုင်းအဆင့် 75 MM ဆိုဒီယမ် dihydrogen ဖော့စဖိတ် monohydrate, 1.7 MM 1-octanesulfonic အက်ဆစ်ဆိုဒီယမ်ဆားပါဝင်သည်, 0.01% triethylamine, 25 အွမ် EDTA နှင့် 7% acetonitrile နှင့်သော pH 3.0% ဖော့စဖောရက်အက်ဆစ်နှင့်အတူ 85 မှချိန်ညှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစီးဆင်းမှုနှုန်းကို 0.5 ml / မိနစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့စံကွေးနှင့်အထွတ်အထိပ်ဧရိယာတွက်ချက်ခဲ့ကြသည် (Aragona et al ။ , 2003) ။ အဆိုပါထောက်လှမ်းန့်သတ်ချက်နမူနာနှုန်း ~ 10 pg ဖြစ်ခဲ့သည်။
4.5 ။ D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor mRNA များအတွက် situ Hybrid အတွက်
စမ်းသပ်မှု3ကနေဦးနှောက်အပိုင်း alternate အစုံအဘို့အလုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည် On-site ကို DA အဲဒီ receptor mRNA ၏ Hybrid တံဆိပ်ကပ်ခြင်း။ (ရက်ရက်ရောရောကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှဒေါက်တာ O. Civelli, Irvine,, CA ပေး) Antisense နှင့်ခံစား riboprobes, (D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor mRNA တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်လျူ et al ။ , 2010) ။ စုံစမ်းစစ်ဆေး [, သက်ဆိုင်ရာ DNA ကို template ကို၏ 37 μg / μlပါဝင်သည်ဟုတစ်ဦးကူးယူ-optimized ကြားခံအတွက် 1 ဇများအတွက် 0.5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာတစ်ဦးချင်းအမည်တပ်ထားသောခဲ့ကြသည်35S] -CTP၊ ATP၊ UTP နှင့် GTP ၏ ၄ မီလီမီတာ၊4M dithiothreitol (DTT), RNasin (0.2 U / μl) နှင့် RNA polymerase (40 U / μl) ။ အဆိုပါ DNA ကို template ကိုထို့နောက် 20 U / μl DNaseI နှင့်အတူကြေညက်ခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် Chromatography Columns (Bio-Rad, Hercules, CA) ကို အသုံးပြု၍ သန့်စင်ပြီးနောက် ၅၀% deionized formamide၊ 1% dextran sulfate, 50 × SSC, 10 mM ဆိုဒီယမ်ဖော့စဖိတ်ကြားခံ (ရော၊ PB3pH)၊ × Denhardt's solution, 10 mg / ml တဆေး tRNA နှင့် 7.4 mM DTT 1 × 0.2 ကိုရရှိရန်6 CPM / ml ။
ဦးနှောက်အပိုင်း4မိလျှော့ချရန်များအတွက် 0.1 မိဘို့ PBS နှင့်ဆေးနှင့် triethanolamine (pH ကို 4) တွင် 20% acetic anhydride နဲ့ကုသ 10 မိဘို့ 0.25 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 8.0 M ကဖော့စဖိတ် buffered ဆား (PBS), အတွက် 15% paraformaldehyde အတွက် fixed ခဲ့ကြသည် Non-တိကျတဲ့ binding ။ ဆလိုက်ပြီးတော့2အတွက်ကိုဆေးကြောခဲ့ကြသည်အီသနောတွေတိုးလာပြင်းအားမှတဆင့်ရေခန်းခြောက်ဆားဆိုဒီယမ် citrate (SSC), (ETOH) (70, 95 နှင့် 100%) ×နှင့် Air-ခန်းခြောက်လေ၏။
တစ်ခုချင်းစီကိုဆလိုက်သင့်လျော်သောပါဝင်တဲ့ 100 μl Hybrid ဖြေရှင်းချက်ကိုလက်ခံရရှိ 35က S-label တပ်ထားသောစုံစမ်းစစ်ဆေး, အဖုံး-ချော်ပြီးနောက် humidified အခန်းထဲကနေ့ချင်းညချင်းအတွက် 55 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့သည်။ ပေါက်ဖွားပြီးနောက်အဖုံး-စာရွက်များ2အတွက်ဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည် SSC ×, ဆလိုက်2မိဘို့ SSC ×ပြီးတော့ RNase ကြားခံ (5 MM Tris-HCl, 37 MM EDTA နှင့် 1 အတွက် 8 ဇများအတွက် 0.8 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာဆေးကြော 0.4 အတွက်နှစ်ကြိမ်ဆေးကြောခဲ့သည် M က NaCl, သော pH 8.0) 25 မီလီဂရမ် / ml RNaseA ်။ ယင်းနောက်ဆလိုက် SSC ၏ပြင်းအားလျော့ကျလာအတွက်ကိုဆေးကြောခဲ့ကြ (SSC × 2, 1 SSC ×နှင့် 0.5 SSC ×)5အဘို့အသီးအသီး MIN နှင့် 0.1 မိဘို့ 65 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ SSC × 60 နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆလိုက် ETOH ၏တိုးမြှင့်ပြင်းအားမှတဆင့်ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးခြင်း, အခန်းအပူချိန်မှယူဆောင်ခဲ့သည်နှင့် Air-ခန်းခြောက်လေ၏။ ကဏ္ဍများအကောင်းဆုံး autoradiograms generate ရန်, အတိုးများစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ဒေသပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ကာလအဘို့ BioMax MR ရုပ်ရှင် (Kodak, Rochester, NY) မှ apposed ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ NACC နှင့်က CP အဘို့, D1R နှင့် D2R mRNA စည်းနှောင် D14 ကဲ့သို့အဘို့အလို့တံဆိပ်ကပ်ပုဒ်မနှင့် D60 တူသောအဲဒီ receptor အသီးသီး 1 နှင့်2ဇများအတွက် apposed စဉ်တွင်ကဏ္ဍများကိုအသီးသီး, 15 နှင့် 6.5 ဇများအတွက်ရိုက်ကူးဖို့ apposed ခဲ့ကြသည်ကပ်ထားပါတယ်။ အဆိုပါ VTA အဘို့, D2R mRNA အဘို့အလို့တံဆိပ်ကပ်ပုဒ်မ 60 ဇများအတွက် apposed ခဲ့ကြသည်နှင့်အ D2 ကဲ့သို့စည်းနှောင်အဘို့အလို့တံဆိပ်ကပ်သောသူတို့ကို 40 ဇများအတွက် apposed ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကအဓိပ္ပာယ် RNA ထိန်းချုပ်မှုကိုလည်းတစ်ခုချင်းစီကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်စုံစမ်းမည်ဟုမျှော်လင့်အဖြစ်မရှိ, တံဆိပ်ကပ်လြှော့ခဲ့သည်။
4.6 ။ DA အဲဒီ receptor autoradiography
စမ်းသပ်မှု4အဘို့, ဦးနှောက်အပိုင်းအခြားအစုံ D1 တူသောနှင့် D2 တူသောအဲဒီ receptor autoradiography များအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ D1 ကဲ့သို့ ligand [125ကျွန်မ] SCH23982 နှင့် D2 ကဲ့သို့ ligand [125ကျွန်မ] 2'-iodospiperone PerkinElmer (Waltham, MA) မှရရှိသောခဲ့ကြသည်။ ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ DA အဲဒီ receptor autoradiography (ဖျော်ဖြေခဲ့သည်Aragona et al ။ , 2006).
4.7 ။ ဒေတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
စမ်းသပ်မှု 1 များအတွက်တစ်ဦး CPP ကတစ်စုံဖြင့်တိုင်းတာသည်အတိုင်း, Pre-စမ်းသပ်ဖို့နှိုင်းယှဉ်ပါက Post-စမ်းသပ်ကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါး-တွဲလှောင်အိမ်ထဲမှာကုန်ကာလ၌သိသိသာသာတိုးများကသတ်မှတ်ခဲ့သည် t-test ။ Locomotor လှုပ်ရှားမှု ANOVA ကုသမှု (အကြား-ဘာသာရပ် variable ကို) ကအကျူး vs. Post-စမ်းသပ်ရွေ့လျား (အတွင်း-ဘာသာရပ် variable ကို) နှင့်ရွေ့လျားနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးနှစ်ဦး-လမ်းထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံသုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု2များအတွက်တစ်ဦးချင်းစီနမူနာ၏ DA အာရုံစူးစိုက်မှုစုဆောင်းတစ်ရှူး၏ပမာဏအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြောင်းနမူနာစုစုပေါင်းပရိုတိန်းအာရုံစူးစိုက်မှုကို အသုံးပြု. ပုံမှန်ခဲ့သည်။ DA အာရုံစူးစိုက်မှု (pg / μgတစ်ရှူး) ၏ပုံမှန်တန်ဖိုးကိုထို့နောက်ဆားထိန်းချုပ်မှုယုတ် DA အာရုံစူးစိုက်မှု၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အသီးအသီးကဦးနှောက်ဒေသအတွက်အုပ်စုများအကြားရာခိုင်နှုန်းကို DA အာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ t-test ။ စမ်းသပ်မှု3နှင့်4ခုနှစ်, autoradiograms ဤဒေသအဘယ်သူမျှမတုန့်ပြန်ပြသအဖြစ် (ထို PFC ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတွင်ထည့်သွင်းမခံခဲ့ရတဲ့ကွန်ပျူတာပုံရိပ်အစီအစဉ် (NIH IMAGE 1.60) ကို အသုံးပြု. NACC, က CP နှင့် VTA အတွက် binding mRNA တံဆိပ်ကပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အဲဒီ receptor ၏ optical သိပ်သည်းဆဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည် ) စမ်းသပ်မှု2အတွက် AMPH ကုသမှုရန်။ အဆိုပါ NACC, က CP နှင့် VTA များအတွက် image ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ rostral / caudal အတိုင်းအတာစမ်းသပ်မှု2များအတွက်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့တူညီခဲ့သည်။ အဆိုပါ NACC နှင့်က CP အကြား Neuroanatomical ဂုဏ်ထူး (ထို Paxinos နှင့် Watson ဟာကြွက်ဦးနှောက် Atlas သုံးပြီးခဲ့Paxinos နှင့် Watson, 1998) ကိုတံဆိပ်ကပ်ခြင်း၏ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် anterior commissure ၏တည်နေရာနှစ်ဦးစလုံးကိုကိုးကားတဲ့လမ်းညွှန်အဖြစ်။ အသီးအသီးကဦးနှောက်ဧရိယာများအတွက်ကဏ္ဍများခန္ဓာဗေဒအသီးအသီးဘာသာရပ်များအတွက်ဘာသာရပ်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီနည်းလမ်းအကြားလိုက်ဖက်ခဲ့ကြသည်တိရိစ္ဆာန်နှုန်းအသီးအသီးကဦးနှောက်ဒေသကနေသုံးကဏ္ဍများကိုနှစ်နိုင်ငံ optical သိပ်သည်းဆကိုတိုင်းတာရရှိသောခဲ့ကြသည်။ နောက်ခံသိပ်သည်းဆတစ်ဦးချင်းစီအပိုင်း၏တိုင်းတာခြင်းကနေနုတ်ခံခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံး optical ထုအဆိုပါဆားထိန်းချုပ်မှုယုတ်၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဦးနှောက်ဒေသအတွင်း Group မှ mRNA အတွက်ကွဲပြားမှုသို့မဟုတ် binding အဆင့်ဆင့်တစ်ဦးကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ဦးချင်းစီ DA အဲဒီ receptor များအတွက်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည် t-test ။ အဆိုပါအရေးပါမှုအဆင့်မှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည် p
ကျနော်တို့လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အရေးပါစာဖတ်ခြင်းအဘို့အကီဗင် Young ကအာဒံ Smith ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes ZXW မှ KLG မှ Kay, MHF31-25570 မှ DAF31-79600 ပေးအပ်နှင့် DAR01-19627, DAK02-23048 နှင့် MHR01-58616 ကထောက်ခံခဲ့သည်။
အတိုကောက်: AMPH, စိတ်ကြွဆေး; ANOVA, ကှဲလှဲ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ; က CP, caudate putamen; CPP က, အခြေအနေများအရပျကို preference ကို; DTT, dithiothreitol; DA, dopamine, ETOH, အီသနော; HPLC မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်အရည် Chromatography; ip, intraperitoneal; PCF, medial prefrontal cortex; NACC, နျူကလိယ accumbens; PBS, ဖော့စဖိတ် buffered ဆား; SSC, ဆားဆိုဒီယမ် citrate, PB, ဆိုဒီယမ်ဖော့စဖိတ်ကြားခံ; VTA, ventral tegmental ဧရိယာ
Ackerman JM, အဖြူရောင် FJ ။ ထပ်ခါတလဲလဲကင်းကုသမှုကနေဆုတ်ခွာအောက်ပါ A10 somatodendritic dopamine autoreceptor sensitivity ကို။ neuroscience ။ လက်တ။ 1990; 117: 181-187 ။ [PubMed]
Aghajanian GK, Bunney BS ။ Dopamine "autoreceptors": microiontophoretic တစ်ခုတည်းဆဲလ်မှတ်တမ်းတင်လေ့လာမှုများအားဖြင့် pharmacological စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ Naunyn Schmiedebergs Arch ။ Pharmacol ။ 1977; 297: 1-7 ။ [PubMed]
Aragona BJ တစ် monogamous ကြွက်မျိုးစိတ်အတွက်လူမှုရေးရွေးချယ်မှုဝမ် Z. Dopamine စည်းမျဉ်း။ တပ်ဦး။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 2009; 3: 1-11 ။
Aragona BJ, Curtis JT, Davidson AJ, ဝမ် Z ကို, Stephan FK ။ ကြွက်များတွင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian အချိန်အရပ်ကိုသင်ယူမှု၏အမူအကျင့်များနှင့် neurochemical စုံစမ်းစစ်ဆေး။ ဂျေ Biol ။ rhythms ။ 2002; 17: 330-344 ။ [PubMed]
နျူကလိယဘို့ Aragona BJ, လျူ Y ကို, Curtis JT, Stephan FK, ဝမ် Z. တစ်ဦးကဝေဖန်အခန်းကဏ္ဍအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်-preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် dopamine accumbens ။ ဂျေ neuroscience ။ 2003; 23: 3483-3490 ။ [PubMed]
Aragona BJ, လျူ Y ကို, ယု YJ, Curtis JT, Detwiler JM, Insel TR, ဝမ် Z. နျူကလိယ differential dopamine accumbens monogamous pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု mediates ။ နတ်။ neuroscience ။ 2006; 9: 133-139 ။ [PubMed]
Aragona BJ, Detwiler JM, အ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်ဝမ် Z. ဖက်တမင်းဆေးပြားဆုလာဘ်။ neuroscience ။ လက်တ။ 2007; 418: 190-194 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bardo MT, Bevins RA ။ အေးစက်သောအရပ် preference ကို: အဘယျသို့ကမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ preclinical ဥာဏ် add သနည်း? Psychopharmacology (Berl ။ ) 2000; 153: 31-43 ။ [PubMed]
Becker က JB ။ striatum အပေါ် 17 beta ကို-estradiol ၏တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု: dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ synapses ။ 1990; 5: 157-164 ။ [PubMed]
Becker က JB, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက်ဟူအမ်လိင်ကွဲပြားမှု။ တပ်ဦး။ Neuroendocrinol ။ 2008; 29: 36-47 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Becker က JB, Ramirez VD ။ အဆိုပါစိတ်ကြွဆေးအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုစသည်တို့အတွက်ကြွက် striatal တစ်ရှူးများထံမှ catecholamines ၏လွှတ်ပေးရန်နှိုးဆွ။ ဦးနှောက် Res ။ 1981; 204: 361-372 ။ [PubMed]
Becker က JB, Molenda H ကို, Hummer DL ။ ကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးဖို့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုများတွင်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှုဖြန်ဖြေယန္တရားများအဘို့အဂယက်ရိုက်။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 2001; 937: 172-187 ။ [PubMed]
Berke JD, Hyman SE ။ စွဲ, dopamine နှင့်မှတ်ဉာဏ်၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2000; 25: 515-532 ။ [PubMed]
Bouthenet ML, Souil အီး, Martres အမတ်, Sokoloff P ကို, Giros B, Schwartz JC ။ situ Hybrid histochemistry အတွက်သုံးပြီးကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine D3 အဲဒီ receptor mRNA ၏ Localization: dopamine D2 အဲဒီ receptor mRNA နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်။ ဦးနှောက် Res ။ 1991; 564: 203-219 ။ [PubMed]
စခန်း DM, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ ာင်းမှဖြစ်ပေါ်နိုင်။ ရွေ့လျား, ကျပုံစံအပြုအမူများနှင့်ဦးနှောက် monoamines အပေါ်နာတာရှည် D-စိတ်ကြွဆေးကုသမှု၏တည်မြဲဆိုးကျိုးများအတွက်ဗြဲလိင်ကွဲပြားမှု။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 1988; 30: 55-68 ။ [PubMed]
ကမ့်ဘဲလ် J ကို, လှံ LP ။ စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် locomotor activation နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်အခြေအနေများအရပျကို preference ကိုစောစောကိုင်တွယ်၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 1999; 143: 183-189 ။ [PubMed]
Carter က CS, DeVries AC အ, Getz ll ။ နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေစျမယား၏ဇီဝကမ္မအလွှာ: မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မော်ဒယ်။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 1995; 19: 303-314 ။ [PubMed]
Castner လုပ် SA, Becker က JB ။ ကြွက် dorsal striatum အတွက်ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇစကားရပ်အပေါ်စိတ်ကြွဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1996; 712: 245-257 ။ [PubMed]
cho AK, Melega WP, Kuczenski R ကို, Segal DS, Schmitz DA ။ သွေးကြောသွင်းခြင်းနှင့်အရေပြားအောက်ဆုံးစိတ်ကြွဆေးပြီးနောက် Caudate-putamen dopamine နဲ့ stereotypy တုံ့ပြန်မှု profile များကို။ synapses ။ 1999; 31: 125-133 ။ [PubMed]
clause P ကို, Bowyer JF ။ D-စိတ်ကြွဆေးမျိုးစုံကိုဆေးများပြီးနောက်ဦးနှောက်အပူချိန်နှင့်ကြွက်များအတွင်းစိတ်ကြွဆေးနှင့် dopamine ၏ caudate / putamen microdialysate အဆင့်ဆင့်၏အချိန်သင်တန်း။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1999; 890: 495-504 ။ [PubMed]
Curtis JT, microtine ကြွက်များတွင်ဝမ် Z. ဖက်တမင်းဆေးပြားသက်ရောက်မှု: monogamous နှင့်ကရာ vole မျိုးစိတ်ကိုအသုံးပြုပြီးနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု။ neuroscience ။ 2007; 148: 857-866 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Curtis JT, Stowe JR, လူမှုရေးနှင့် Non-လူမှုရေး voles အတွက် striatal dopamine system ပေါ်တွင် intraspecific interaction က၏ဝမ် Z. Differential ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience ။ 2003; 118: 1165-1173 ။ [PubMed]
Curtis JT, လျူ Y ကို, Aragona BJ, ဝမ် Z. Dopamine နှင့်မယား။ ဦးနှောက် Res ။ 2006; 1126: 76-90 ။ [PubMed]
di Chiara, G, Tanda, G, Frau R ကို, Carboni အီးစိတ်ကြွဆေးအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine ၏ဦးစားပေးဖြန့်ချိတွင်: ဒေါင်လိုက်စိုက်ထားအာရုံစူးစိုက်မှု Dialysis စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်ရရှိသောနောက်ထပ်သက်သေသာဓက။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 1993; 112: 398-402 ။ [PubMed]
Diaz J ကို, Levesque: D, Lammers CH, Griffon N ကို, Martres အမတ်, Schwartz JC, ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine D3 အဲဒီ receptor ဖော်ပြအာရုံခံ၏ Sokoloff P. Phenotypical စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ neuroscience ။ 1995; 65: 731-745 ။ [PubMed]
Drevets WC, Gautier ကို C, စျေး JC, Kupfer DJ သမား, Kinahan PE, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို, စျေး JL, Mathis CA. လူ့ ventral striatum အတွက်ဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန် Euphoria ပီတိတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 49: 81-96 ။ [PubMed]
Fattore L ကို, Altea S ကိုမူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် Fratta ဒဗလျူလိင်ကွဲပြားမှု: တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့လေ့လာမှုများ၏သုံးသပ်ချက်။ အမျိုးသမီးကနျြးမာရေး (Lond Engl ။ ။ ) 2008; 4: 51-65 ။ [PubMed]
Gingrich B, လျူ Y ကို, Cascio ကို C, ဝမ် Z ကို, Insel TR ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် Dopamine D2 receptors (အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးပူးတွဲမှုများအတွက်အရေးကြီးပါသည်Microtus ochrogaster) ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 2000; 114: 173-183 ။ [PubMed]
ဟင်နရီ DJ သမား, အဖြူရောင် FJ ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်ရေးကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွင်း D1 dopamine အဲဒီ receptor sensitivity ကို၏ persistent တိုးမြှင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 1991; 258: 882-890 ။ [PubMed]
ဟင်နရီ DJ သမား, အဖြူရောင် FJ ။ နျူကလိယ၏တားစီးတိုးမြှင့်ကင်းမျဉ်းပြိုင်ဖို့အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းဇွဲအာရုံခံ accumbens ။ ဂျေ neuroscience ။ 1995; 15: 6287-6299 ။ [PubMed]
ဟင်နရီ DJ သမား, ဂရင်း, MA, အဖြူရောင် FJ ။ အဆိုပါ mesoaccumbens dopamine စနစ်ကိုကင်းများ၏ Electrophysiological သက်ရောက်မှု: ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်မှု။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 1989; 251: 833-839 ။ [PubMed]
ဟူ XT, Koeltzow TE, Cooper က, DC, Robertson က GS, အဖြူရောင် FJ, Vezina P. ventral tegmental ဧရိယာစိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine D1 အဲဒီ receptor အချက်ပြပွောငျးလဲထပ်ခါတစ်လဲလဲ။ synapses ။ 2002; 45: 159-170 ။ [PubMed]
ဟူ M က, Crombag HS, ရော်ဘင်ဆင် TE, Becker က JB ။ Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းရန် propensity အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု၏ဇီဝအခြေခံ။ Neuropsychopharmacology ။ 2004; 29: 81-85 ။ [PubMed]
Insel TR, Preston က S, Winslow JT ။ အမူအကျင့်အကျိုးဆက်များ: အ monogamous အထီးအတွက်အဖော်ရှာ။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 1995; 57: 615-627 ။ [PubMed]
ကယ်လီ AE, Berridge KC ။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများမှဆက်စပ်မှု: သဘာဝအလျောက်ဆုလာဘ်၏ neuroscience ။ ဂျေ neuroscience ။ 2002; 22: 3306-3311 ။ [PubMed]
လျူ Y ကို, Aragona BJ, Young က ka, Dietz DM, Kabbaj M က, Mazei-Robison M က, Nestler EJ, ဝမ် Z. နျူကလိယ dopamine တစ် monogamous ကြွက်မျိုးစိတ်အတွက်လူမှုရေးစဘွန်း၏စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ချို့ယွင်း mediates accumbens ။ Proc.Natl ။ Acad.Sci.USA 2010; 107: 1217-1222 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lynch WJ ။ မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှအားနည်းချက်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ Exp ။ Clin ။ Psychopharmacol ။ 2006; 14: 34-41 ။ [PubMed]
Lynch WJ, ကာရိုး ME ။ ကြွက်များတွင်သွေးကြောသွင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူများဝယ်ယူအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 1999; 144: 77-82 ။ [PubMed]
မာကျူရီ NB, Calabresi P ကို, ဘာနာဂျီဟာ substantia nigra ပိုဒျ compacta အများနှင့် ventral tegmental ဧရိယာ၏အာရုံခံအပေါ် dopamine နဲ့ dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ electrophysiological လုပ်ရပ်တွေကို။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 1992; 51: 711-718 ။ [PubMed]
မာကျူရီ NB, Saiardi တစ်ဦးက, Bonci တစ်ဦးက, Picetti R ကို, Calabresi P ကို, ဘာနာ, G, dopamine D2 အဲဒီ receptor လစ်လပ်ကြွက်တွေကနေ dopaminergic အာရုံခံအတွက် autoreceptor function ကို၏ Borrelli အီးဆုံးရှုံးမှု။ neuroscience ။ 1997; 79: 323-327 ။ [PubMed]
Missale ကို C, Nash SR, ရော်ဘင်ဆင် SW, Jaber M က, caron MG ။ Dopamine receptors: ဖွဲ့စည်းပုံကနေ function ကိုရန်။ Physiol ။ ဗျာ 1998; 78: 189-225 ။ [PubMed]
Narayanan NS, Guarnieri DJ သမား, DiLeone RJ ။ ဇီဝဖြစ်စဉ်ဟော်မုန်း, dopamine ဆားကစ်များနှင့်နို့တိုက်ကျွေး။ တပ်ဦး။ Neuroendocrinol ။ 2010; 31: 104-112 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ness RM, Berridge KC ။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ Psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု။ သိပ္ပံ။ 1997; 278: 63-66 ။ [PubMed]
Nestler EJ ။ စွဲလမ်းတစ်ဘုံမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းရှိပါသလား? နတ်။ neuroscience ။ 2005; 8: 1445-1449 ။ [PubMed]
Oades RD, Halliday GM က။ Ventral tegmental (A10) စနစ်: neurobiology ။ 1 ။ ခန္ဓာဗေဒနဲ့ဆက်သွယ်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1987; 434: 117-165 ။ [PubMed]
Palmiter RD ။ dopamine နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူတစ်ခုဇီဝကမ္မသက်ဆိုင်ရာဖျန်ဖြေလား? ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2007; 30: 375-381 ။ [PubMed]
Panksepp J, Knutson B, Burgdorf J. စွဲလမ်းမှုအတွက် ဦး နှောက်စိတ်ခံစားမှုစနစ်၏အခန်းကဏ္: - အာရုံကြော - ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်နှင့် `` ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံစာ animal တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်သစ်။ စွဲ။ 2002; 97: 459-469 ။ [PubMed]
Paxinos, G, Stereotaxic Coordinates အတွက် Watson ဟာ C. အဆိုပါ Rat ဦးနှောက်။ ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; San Diego မှ,, CA: 1998 ။
ပီယပ် RC, Kalivas PW ။ စိတ်ကြွဆေးကဲ့သို့သော psychostimulants မှအမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးမြား၏တစ်ဦးက circuitry မော်ဒယ်။ ဦးနှောက် Res ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 1997; 25: 192-216 ။ [PubMed]
Richfield ek, Penney JB, Young က AB ။ ကြွက်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက် dopamine D1 နှင့် D2 receptors အကြားခန္ဓာဗေဒနှင့်ဆှဖှေဲ့ပြည်နယ်နှိုင်းယှဉ်။ neuroscience ။ 1989; 30: 767-777 ။ [PubMed]
Richtand မိုင်, Kelsoe JR, Kuczenski R ကို, Segal DS ။ စိတ်ကြွဆေးကုသကြွက်များတွင်အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ဆက်စပ် dopamine D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor mRNA အဆင့်ဆင့်၏အရေအတွက်။ Neurochem ။ int ။ 1997; 31: 131-137 ။ [PubMed]
ရောဘတ်, DC, Bennett က SA, Vickers GJ ။ အဆိုပါ estrous သံသရာကြွက်တစ်တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအပေါ်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသက်ရောက်သည်။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 1989; 98: 408-411 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, နျူကလိယ accumbens နှင့်စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူယခင်အတွေ့အကြုံကနေထုတ်လုပ် prefrontal cortex အာရုံခံအတွက် Kolb ခ Persistent ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြုပြင်မွမ်းမံ။ ဂျေ neuroscience ။ 1997; 17: 8491-8497 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Jurson PA ဆိုပြီး, Bennett ကဂျာ Bentgen KM ။ လွတ်လပ်စွာကြွက်ရွေ့လျားအတွက် microdialysis လေ့လာမှု: စိတ်ကြွဆေး - (+) နဲ့ကြိုတင်အတှေ့အကွုံကထုတ်လုပ် ventral striatum အတွက် dopamine neurotransmission ၏ persistent ာင်း (နျူကလိယ accumbens) ။ ဦးနှောက် Res ။ 1988; 462: 211-222 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Gorny, G, Mitton အီး, Kolb ခကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်နျူကလိယ accumbens နှင့် neocortex အတွက် dendrites နှင့် dendritic ကျောရိုး၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပွောငျးလဲ။ synapses ။ 2001; 39: 257-266 ။ [PubMed]
Roth ME, ME Carroll ။ ကြွက်များတွင်တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအောက်တွင် IV စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်နောက်ဆက်တွဲပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများဝယ်ယူအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 2004; 172: 443-449 ။ [PubMed]
Rouge-ပိုတငျးက F, Usiello တစ်ဦးက, Benoit-Marand M က, Gonon က F, Piazza PV, မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်ကိုကင်းများကသွေးဆောင် extracellular dopamine အတွက် Borrelli အီးအပြောင်းအလဲများ: D2 receptors ခြင်းဖြင့်အရေးပါထိန်းချုပ်မှု။ ဂျေ neuroscience ။ 2002; 22: 3293-3301 ။ [PubMed]
Sora အဘိဓါန်ငါ Fujiwara Y ကို, Tomita H ကို, Ishizu H ကို, Akiyama K ကို Otsuki က S, Yamamura HI ။ ကြွက်ဦးနှောက်နှစ်ခု dopamine D2 အဲဒီ receptor isoforms ၏ mRNA အဆင့်ဆင့်အပေါ် haloperidol သို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေးကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်း။ Jpn ။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု Neurol ။ 1992; 46: 967-973 ။ [PubMed]
Tiberi M က, Jarvie KR, Silvia က C, Falardeau P ကို, Gingrich ဂျာ Godinot N ကို, ဘာထရန်, L, ယန်-Feng တို့ TL, Fremeau RT ကို, Jr. caron MG ။ ကိုယ်ပွား, မော်လီကျူးစရိုက်လက္ခဏာတွေ, တစ်စက္ကန့် D1 dopamine အဲဒီ receptor မျိုးကွဲကုဒ်သွင်းနေတဲ့မျိုးဗီဇ၏မျိုးရိုးဗီဇကိုတာဝန်ကျတဲ့နေရာ: အ D1A အဲဒီ receptor နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ differential ကိုစကားရပ်ပုံစံ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 1991; 88: 7491-7495 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
dopamine D2 receptors ၏နှစ်ခု isoforms ၏ Usiello တစ်ဦးက, Baik JH, Rouge-ပိုတငျးက F, Picetti R ကို, Dierich တစ်ဦးက, LeMeur M က, Piazza PV, Borrelli အီးထူးခြားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို။ သဘာဝ။ 2000; 408: 199-203 ။ [PubMed]
ဝမ် Z ကို, ယု, G, Cascio ကို C, လျူ Y ကို, Gingrich B, Insel TR ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေး၏ Dopamine D2 အဲဒီ receptor-mediated စည်းမျဉ်း (Microtus ochrogaster): pair တစုံဘွန်းများအတွက်ယန္တရား? ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 1999; 113: 602-611 ။ [PubMed]
Weiner DM, Levey AI, Sunahara RK, Niznik HB, O'Dowd BF, Seeman P, Brann MR ။ ကြွက် ဦး နှောက်ထဲမှာ D1 နှင့် D2 dopamine အဲဒီ receptor mRNA ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ ယူအက်စ်အေ 1991; 88: 1859-1863 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
White က FJ, Kalivas PW ။ စိတ်ကြွဆေးနှင့်ကိုကင်းစွဲများတွင်ပါဝင်ပတ်သက် Neuroadaptations ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1998; 51: 141-153 ။ [PubMed]
White က FJ, ဝမ် RY ။ A10 dopamine အာရုံခံ: dopamine agonists မှပစ်ခတ်မှုနှုန်းနှင့် sensitivity ကိုအဆုံးအဖြတ်အတွက် autoreceptors ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 1984a; 34: 1161-1170 ။ [PubMed]
White က FJ, ဝမ် RY ။ ကြွက် ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopamine autoreceptors ၏ Pharmacological စရိုက်လက္ခဏာတွေ: microiontophoretic လေ့လာမှုများ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 1984b; 231: 275-280 ။ [PubMed]
Williams က JR, Catania KC, Carter က CS ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး (Microtus ochrogaster): လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Horm ။ ပြုမူနေ။ 1992; 26: 339-349 ။ [PubMed]
Winslow JT မိပြီ N ကို, Carter က CS, Harbaugh CR, Insel TR ။ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အတွက်ဗဟို vasopressin များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝ။ 1993; 365: 545-548 ။ [PubMed]
လူငယ်တို့ Ka, Gobrogge KL, လျူ Y ကို, ဝမ် Z. pair တစုံဘွန်း၏ neurobiology: တစ်လူမှုရေးအရ monogamous ကြွက်ကနေထိုးထွင်းသိမြင်။ တပ်ဦး။ Neuroendocrinol ။ 2010 Doi: 10.1016 / j.yfrne.2010.07.006 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လူငယ်တို့ Ka, Gobrogge KL, ဝမ် ZX ။ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူ၏မူးယစ်ဆေးများအကြားအပြန်အလှန်ထိန်းညှိအတွက် mesocorticolimbic dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2011; 35: 498-515 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Zahm DS ။ နျူကလီးယပ် accumbens အပေါ်အလေးပေးနှင့်အတူတုံ့ပြန်သပ္ပါယ်အချို့ subcortical အလွှာတခုတခုအပေါ်မှာ Integrated neuroanatomical ရှုထောင့်။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2000; 24: 85-105 ။ [PubMed]
zhou JY, မို ZX, zhou SW ။ စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကိုကြွက်ဦးနှောက်အတွက်ဗဟို neurotransmitter အဆင့်ဆင့်အပေါ် rhynchophylline ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Fitoterapia ။ 2010; 81 (7): 844-848 ။ [PubMed]